02 / 10 / 2019 - RayHaber
Maalinta: 2 Oktoobar 2019
Borotokoolka Kocaeli ee Ilaalinta Nabdoonaanta Dadka lugaynaya
2019 waxaa loogu dhawaaqay 'Sanadka Gawaarida Wadooyinka Gaarka ah' Wasaaradda Arimaha Gudaha. In kasta oo ganaaxyada taraafikada kuwa aan mudnaanta koowaad siineyn dadka lugeynaya ay ku kordheen 100, Kocaeli Governorship, Kocaeli Security Security Directorate, Kocaeli Provincial Gendarmerie Command iyo Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli [More ...]
War wanaagsan oo ku saabsan dalxiiska barafka ee Izmir
Wasiirka Beeraha iyo Dhirta Bekir Pakdemirli, Xarunta Bozdag Ski ayaa baaray. Pakdemirli, "jiilaalka hore sababay qatarta cudurka ayaa shaqeyn doonta xilliga qaboobaha soo socda," ayuu yiri. Odemis waa mid ka mid ah garoonnada barafka ee ugu muhiimsan Gobolka Aegean ee dalxiiska jiilaalka. [More ...]
50 wuxuu yareynayaa qiimaha waxsoosaarka Shir Madaxeedka Maalgashiga Robot
Maalgashiga Robot iyo Wershadaha Codsiyada 4.0 ee Codsiyada ayaa bilaabmay. 3 wuxuu socon doonaa illaa fiidnimada Khamiista ee Oktoobar. Maalgashiga tikniyoolajiyadda cusub had iyo jeer uma baahna miisaaniyad sare iyo wakhtiyo rog-rogid. gaar ah [More ...]
Aaga Warshadaha Difaaca ee Xorta ah Waa in Lagu Sameeyaa Ankara
Radar Milateriga Caalamiga ah iyo Shirkii Amniga Xuduudaha - MRBS waxaa furay furitaanka Wasiirka Arimaha Gudaha Süleyman Soylu iyo Wasiirka Difaaca Qaranka Hulusi Akar. Furitaanka Shir-madaxeedka, heshiiska iskaashiga istiraatiijiyadeed ee istiraatiijiyadda gudaha iyo nabaad-qaadista ee Wasaaradda Difaaca Qaranka [More ...]
Karşıyaka Xaaladda ugu dambeysay ee Mashruuca Çiğli Tram
02 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 1
Waxaa la bilaabay Abril Karşıyaka Mashruuca, oo loo diyaariyey in lagu ballaariyo taraamka jihada Çiğli, ayaa waxaa ansaxiyay Maamulka Go'aanka ee EIA waxaana la bilaabay howsha EIA. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, markay muwaadiniintu ka codsadaan in loo kordhiyo jihada taraamka duubista gacmaha. mashruuca [More ...]
Ergada Wershadaha Difaaca ee Kardemir
Weftiga ka socda Madaxtooyada ee Warshadaha Difaaca, Karabük Iron iyo steel Enterprises (KARDEMIR) AS. KARDEMİR AŞ wuxuu martigaliyay wafdi ka socda Madaxtooyada warshadaha Difaaca. Soosaarka iyo maal-gelinta KARDEMİR maanta waaxda difaaca [More ...]
Midnimada Haydarpa Sola: 'Haydarpaşa iyo Saldhigga Tareenka ee Sirkeci oo loo gudbiyey IMM'
Haydarpaşa Solidarity Haydarpaşa iyo Xarunta Tareenka Sirkeci ee wareejinta Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul ayaa qoraal qoraal ah soo saaray. Description; “Waxaan codsaneynaa wareejinta Haydarpadara iyo Sirkeci Station in loo wareejiyo Dowlada hoose ee Magaaladda Istanbul iyadoo shuruud looga dhigay in loo isticmaalo ujeedooyinkooda koowaad iyo kan shacabka! Haydarpasa [More ...]
Wadada Wadada Wadada Esenbo Airporta 1 Waxay Ku Kacday Bilyan Doolar
Esenboğa Airport Metro 1 waxay ku kacaysaa Bilyan Doollar: Duqa Magaalada Ankara Mansur Yava Mans wuxuu ka qeybgalay barnaamijka Alt One on One Private ”ee Fatih Altaylı TV-ga Habertürk. Isagoo sharraxaya waxqabadka maalinlaha ah ee 200 ee ka baxa telefishanka tooska ah, Duqa Yavaş wuxuu sidoo kale soo bandhigay mashaariicdiisa Başkent. [More ...]
Codsiga Manisa Card cusbooneysiiyay
MANULAŞ, oo ah shirkad hoos timaada degmada Manisa Metropolitan, ayaa shaacisay in dalabka Manisakart lagu cusboonaysiiyay Apple Store. Codsiga Manisa Card, kaas oo u suurtagelinaya muwaadiniinta helitaanka macluumaadka ay uga baahan yihiin khadadka baska ee xuduudaha Degmada Manisa ee Dukaanka App Store. [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha oo leh Kaararka Aqoonsiga Ellka 3 Maalinta Bilaash ah
Dawlada Hoose ee Magaalada Konya waxay ardayda siisaa fursad ay ugu adeegsadaan kaararka aqoonsiga ardaygooda sida Elkart ee gaadiidka dadweynaha iyo inay ka faa iideystaan ​​baabuurta gaadiidka dadweynaha 3 oo lacag la’aan ah adeegsiga koowaad. Dowlada Hoose ee Konya; Jaamacadda Selçuk, Necmettin [More ...]
Salim Dervişoğlu si uu u dhiso xarun labaad ee mobilada
Joojinta guur guura ayaa laga dhisayaa Salim Dervişoğlu Street, kaas oo ka duwan wadada D-100, oo gaadiidka dadweynaha ay adeegsadaan degmooyinka Kocaeli ee Karamürsel, Gölcük iyo Başiskele. Kii u horreeyay ee loo dhiso guriga dadweynaha ayaa joogsanaya [More ...]
GaadiidkaPark 12 Gaadiidka fudfudud oo ka socda degmada kuna sii jeeda Jaamacadda Kocaeli
Maraakiibtan yaraa Turkey ee gaadiidka Kocaeli degmada Metropolitan ulaşımpark shuraakada, wadarta 12 degmooyinka kala duwan ee Jaamacadda Kocaeli (kalluun) 'Maxaa ka dhigay adeegga gaadiidka. Dawlada Hoose waxay bixisaa adeeg gaadiid Kocaeli baska deegaanka ee 336. Metropolitan, 2019-2020 xilliyada waxbarashada [More ...]
Burburinta meelaha loo isticmaalay dabaqyada hoose ee Saldhigga Esenler Bus, oo ay la wareegtay IMM, waa la dhammeystirey. Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul (IMM), 9 waxay la wareegtay Sebtember 15 July Xarunta Demoqraadiyadda (Esenler) waxay nadiifinaysaa meelaha dayaca, dhibaatooyinka. Ujeedada dabaqa hoose ee saldhiga basku [More ...]
IMM waxay raaligelisay Metrobus waxayna ku dhawaaqdaa xalka
Dawlada Hoose ee Magaalada Istanbul ayaa raaligalin ka bixisay sababta oo ah xooga daran ee mitidka Altunizade ee subaxa hore. Si xaalada loo wanaajiyo, Söğütlüçeşme wuxuu yiri mid walba oo metro ah [More ...]
IETT si ay u Taageerto Mashruuca Baabuur wadista ee ITU
Agaasinka Guud ee IETT wuxuu taageeri doonaa mashruuca gawaarida darawalnimada ah oo ay Jaamacadda Farsamada ee Istanbul qorsheyneyso inay si wada jir ah ula soo saarto saamileyda caalamiga ah. Agaasinka Guud ee IETT, oo ka mid ah kuwa ku xiran degmada Istanbul Metropolitan Municipal (IMM), waa mid deegaan ahaan xasaasi u ah, ilo tamar kale oo fududeeya nolosha magaalada. [More ...]
Tababarka Ardayda Baaskiil wadista
Maamulka magaalo-xeebeedka Kahramanmaraş ayaa tababar ku saabsan baaskiilka siinaya ardayda ku sugan xaafada Erkenez si kor loogu qaado isticmaalka baaskiilka ee gaadiidka magaalada. Caruurtii waxay jidka u galeen sidii ay ku aadi lahaayeen dugsiga macallimiintoodii. 23-27 Sebtember gudaheeda marka loo eego baaxadda ololaha 'Aan Ku aadno Iskuulka carruurta "ayaa ay soo saareen Ururka Caafimaadka ee Magaalooyinka Caafimaadka [More ...]
Bozöyük wuxuu isku dayay in lagu eedeeyo kiiska shilalka tareenka
In Bozoyuk 2009 ee la dayacay ee waayen tareen in halligmeen shan rakaab ah iyo masuuliyadooda sheegtay in Jamhuuriyadda Turkey Tareennada State (TCDD) ayaa dacweeyay ka dib markii laba shaqaalaha awood u leeyihiin inay 10 sano ah. Kiiska socda ee ka horreeya maxkamadda Bozüyük Assize Court, the TCDD [More ...]
RayHaber 02.10.2019 Warbixinta Shirka
Hanlı-Çetinkaya Elektrifikasyon Tesisleri Kurulumu İşi Durak Bucak İstasyonları Arasında Oluşan Heyelanın Islah İşi Benzer Demiryolu Haberleri ve İlginizi Çekebilecek Diğer HaberlerRayHaber 25.01.2019 Xaragada 25 / 01 / 2019 Ma jiraan diiwaanno jilicsan oo loogu talagalay 25.01.2019 ee nidaamkeenna.RayHaber 04.02.2019 [More ...]
Tirada Ankarakart ayaa dhaaftay Million 6
Tirada Ankarakart ee loo adeegsaday dhamaan gawaarida dadweynaha ee caasimada ayaa ka badan 6 milyan. Buugga Qorshaha Istaraatiijiyadeed ee 2020-2024 ee Agaasinka Guud ee EGO, tirada Ankarakart iyadoo loo eegayo noocyadooda ayaa sidoo kale lagu daray. Marka loo eego xogta EGO, 30 bishii Juun guud ahaan 6 milyan oo ku taal Ankara [More ...]
Gudoomiyaha degmada Sırmalı Baaritaan ku socda Wadada Edremit Çanakkale
Edremit Çanakkale D550-06 Si looga hortago ciladaha taraafikada ee wadada ka dhaca, kulan ayaa lagu qabtay gudoomiyaha gudoomiyaha degmada Edremit Ali Sırmalı waxaana kormeer waddo ah lagu sameeyay wadada. Si loo hubiyo in socodka gaadiidka ee degmadeena uu yahay mid deggan oo aamin ah, Guddoomiyaha Degmada Edremit Ali [More ...]
Maanta Taariikhda: 15 Oktoobar 1939 Isgoyska Tareenka Ilica-Bonito Taariikhda
News Archive Xulo bisha Oktoobar 2019 (237) Sebtembar 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (634) Juun 2019 (504) May 2019 (526) Abriil 2019 (418) Maarso 2019 (521) Febraayo 2019 (483) Janaayo 2019 (502) Range 2018 (620) Nofeembar 2018 (504) Oktoobar 2018 (435) Sebtembar 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) Juun 2018 (581) May 2018 (467) Abriil 2018 (545) Maarso 2018 (554) Febraayo 2018 (500) Janaayo 2018 (557) Range 2017 (509) Nofeembar 2017 (427) Oktoobar 2017 (538) Sebtembar 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) Juun 2017 (477) May 2017 (493) Abriil 2017 (434) Maarso 2017 (540) Febraayo 2017 (477) Janaayo 2017 (538) Range 2016 (487) Nofeembar 2016 (631) Oktoobar 2016 (657) Sebtembar 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) Juun 2016 (661) May 2016 (664) Abriil 2016 (700) Maarso 2016 (804) Febraayo 2016 (855) Janaayo 2016 (751) Range 2015 (799) Nofeembar 2015 (640) Oktoobar 2015 (624) Sebtembar 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) Juun 2015 (535) May 2015 (577) Abriil 2015 (622) Maarso 2015 (1017) Febraayo 2015 (878) Janaayo 2015 (1077) Range 2014 (963) Nofeembar 2014 (826) Oktoobar 2014 (771) Sebtembar 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) Juun 2014 (735) May 2014 (957) Abriil 2014 (972) Maarso 2014 (864) Febraayo 2014 (720) Janaayo 2014 (733) Range 2013 (664) Nofeembar 2013 (656) Oktoobar 2013 (548) Sebtembar 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) Juun 2013 (577) May 2013 (734) Abriil 2013 (1059) Maarso 2013 (1102) Febraayo 2013 (811) Janaayo 2013 (906) Range 2012 (911) Nofeembar 2012 (1168) Oktoobar 2012 (830) Sebtembar 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) Juun 2012 (591) May 2012 (445) Abriil 2012 (563) Maarso 2012 (699) Febraayo 2012 (546) Janaayo 2012 (417) Range 2011 (149) Nofeembar 2011 (35) Oktoobar 2011 (23) Sebtembar 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) Juun 2011 (16) May 2011 (13) Abriil 2011 (13) Maarso 2011 (33) Febraayo 2011 (24) Janaayo 2011 (13) Range 2010 (335) Nofeembar 2010 (12) Oktoobar 2010 (15) Sebtembar 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) Juun 2010 (19) May 2010 (6) Abriil 2010 (3) Maarso 2010 (62) Febraayo 2010 (303) Janaayo 2010 (1838) Range 2009 (4) Nofeembar 2009 (1) Oktoobar 2009 (3) Sebtembar 2009 (3) August 2009 (2) Juun 2009 (3) May 2009 (2) Abriil 2009 (3) Maarso 2009 (9) Febraayo 2009 (4) Janaayo 2009 (3) Nofeembar 2008 (1) Oktoobar 2008 (1) Sebtembar 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) Juun 2008 (2) May 2008 (2) Abriil 2008 (1) Maarso 2008 (3) Febraayo 2008 (5) Janaayo 2008 (2) Range 2007 (2) Oktoobar 2007 (2) July 2007 (1) May 2007 (1) Abriil 2007 (1) Febraayo 2007 (2) Janaayo 2007 (1) Range 2006 (1) Oktoobar 2006 (3) August 2006 (1) Juun 2006 (2) May 2006 (2) Abriil 2006 (2) Maarso 2006 (2) Nofeembar 2005 (2) August 2005 (1) Juun 2005 (1) Maarso 2005 (2) Febraayo 2005 (1) Janaayo 2005 (1) Range 2004 (1) Oktoobar 2004 (3) July 2004 (1) May 2004 (2) Range 2003 (1) Oktoobar 2003 (1) May 2003 (1) Maarso 2003 (1) Febraayo 2003 (1) Janaayo 2003 (1) Range 2002 (1) Oktoobar 2002 (4) August 2002 (1) Abriil 2002 (1) Maarso 2002 (2) Janaayo 2002 (2) July 2001 (1) Juun 2001 (1) Maarso 2001 (1) May 2000 (3) Maarso 1999 (1) Oktoobar 1998 (2) Maarso 1998 (1) August 1997 (1) Oktoobar 1996 (1) August 1996 (2) May 1995 (1) August 1992 (1) May 1990 (1)